महिनावारीमा पेनकिलर खाने कि नखाने ? - Makalukhabar.com
महिनावारीमा पेनकिलर खाने कि नखाने ?
मकालु खबर	 आइतबार, चैत १५, २०७७ ११:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सानै हुँदा आमाहरुले महिनावारीको बेला घरमा ठूला-ठूला भारी बोकेको देखिन्थ्यो । नछुने भएको भन्दै भान्छाको कामबाट छुटकारा पाएपनि डोको, नाम्लो, कुटो, कोदालो बार्न पर्दैनथ्यो । अहिले पनि ‘छाउपडि’ अथवा महिनावारीको नाममा महिनावारी बार्ने चलन ब्याप्त छ । फरक यती मात्र हो सहरमा गाउँको महिलाले जस्तो शारिरीक श्रम कम गर्नुपर्छ । महिलालाई महिनावारी बार्ने कुराले भन्दा बढी तनाब त्यसबेला हुने दुखाइले दिन्छ ।
हरेकजसो किशोरीको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो महिनावारी भएका बेला पेट दुख्नु । पेटदुख्ने संगसंगै अधिक रक्तश्राव, मुड स्विङ्ग, झर्को लाग्नु, रक्तचाप घट्नु जस्ता समस्या पनि महिनावारी सङ्गै जोडिएर आउँछन् । कतीलाई त महिनावारीको बेला वान्ता आउने समस्या पनि हुन्छ । महिनावारीमा अधिक पेट दुख्नुसङ्गै आउने यस्ता बदलावले आफ्नो विद्यार्थी जीवन र पेशागत जीवनलाई समेत असर पुगेको गुनासो गर्छन् किशोरीहरु ।
गाउँघरमा भित्री बस्त्र र महिनावारीको बेला प्रयोग गर्ने सुतीको कपडा कसैले देख्यो भने आँखा लाग्छ भन्ने अन्धबिश्वास पनि रहेको छ । यसले गर्दा त्यस्ता कपडा लुकाएर ओसतिर सुकाउने गरेको पनि पाईन्छ । त्यसो गरेमा प्रजननसम्बन्धि रोग लाग्न सक्छ ।
डा. नुतन शर्मा	स्त्रीरोग बिशेषज्ञ
कतिपय किशोरीलाई महिनावारीको समयमा गर्नुपर्ने सरसफाईबारे जानकारी हुँदैन । अर्को कुरा महिनावारीमा दुखाई कम गर्ने औषधि खाने की नखाने भन्ने दुबिधा पाइन्छ । दुखाई खप्नै नसकेपछि आफुखुशी पेन किलर औषधी खाने चलन बढ्दो रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
चिकित्सकको परामर्श नलिई दुखाई कम गर्ने औषधि प्रयोग गर्छन् । अधिकांश किशोरी महिनावारीमा प्रयोग गर्न मिल्ने दुखाई कम गर्ने औषधिबारे भ्रम पालेर बसेका हुन्छन् । महिनावारीमा जुन पायो त्यही पेनकिलर प्रयोग गर्दा बाझोपना देखापर्छ भन्ने धारणा राख्ने जमात पनि पाइन्छ ।
महिनावारीमा किन पेट दुख्छ ?
स्त्रीरोग बिशेषज्ञ डा. नुतन शर्मा बिशेषगरी किशोरी महिनावारीमा पेट दुख्ने समस्यालाई सामान्य रुपमा नलिएर आत्तिने गरेको बताउँछिन् । ‘महिनावारी सुरु भएको बेलादेखि नै पेट दुख्न थाल्नुलाई यो राम्रो कुराको संकेत हो भन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ ।’ महिनावारीको समयमा ओभ्युलेसन हुने भएकोले पेट दुख्नैपर्छ । पेट नदुखेमा राम्रोसँग ओभ्युलेसन भएको हुँदैन ।
महिनावारीमा महिलाको पाठेघरमा अण्डा निर्माण हुने र अण्डा फुट्ने काम सँगै हुन्छ । यसरी ओभ्युलेसन चक्र चल्ने भएकोले पेट दुख्छ । १२-१३ बर्षदेखि विवाह नभएसम्मका किशोरीहरुलाई ओभ्युलेसन चक्रले पेट दुख्नाले बाझोपना हुने संभावना अत्यन्तै कम हुन्छ । महिनावारीमा पेट दुख्नु खतराको संकेत कती बेला हुन्छ भन्नेबारे नुतन भन्छिन्, ‘यदी कोही महिलालाई महिनावारी सुरु हुँदा पेट दुख्दैन थियो तर दुई तीन ओटा बच्चा भईसकेपछि ३० वा ३५ वर्ष काटेपछि अधिक पेट दुख्न सुरु भयो र धेरै रक्तश्राब हुन थाल्यो भने यो खतराको लक्षण हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै पाठेघर जाँच गराउनुपर्छ ।
महिलाले सन्तान जन्माईसकेपछि पाठेघरको मुख खुकुलो हुन्छ । त्यसकारण महिनावारीको दुखाई पनि कम हुँदै जान्छ । तर, सन्तान जन्माईसकेपछि पनि अत्याधिक पेट दुख्छ भने यस्तो दुखाई पाठेघरमा हुने ट्युमरमको कारणले हुन्छ । त्यो बाहेक अरु समस्याले पनि पेट दुखेको हुन सक्छ, पत्ता लगाउन भिडियो एक्स रे गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले किशोरी महिलाहरुमा महिनावारीमा पेट दुख्नु भयानक कुरा होईन ।’
पेनकिलर खाने की नखाने ?
महिनावारीको बेला हुने दुखाई कम गर्न पेनकिलरको प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छिन् डा. नुतन शर्मा । उनी भन्छिन्,‘ महिनावारीको सुरुको तीन दिन मात्र सहन नसक्ने गरी पेट दुख्छ । यी तीन दिनमा आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न, पठनपाठन सञ्चालन गर्न पेनकिलर खानुपर्छ । यसको कुनै दीर्घकालिन असर हुँदैन । दुखाईको प्रकृती हेरेर औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । यदी अधिक दुख्छ भने मेफ्टाल ५०० खान सकिन्छ । कम दुख्छ भने जुनसुकै पेनकिलर खादा पनि भयो । पेनकिलरले बाझोपना ल्याउँछ भन्दै अल्पज्ञान भएको मान्छेहरुले भ्रम छरेको हुन् ।’
दुखाईको प्रकृती हेरेर औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । यदी अधिक दुख्छ भने मेफ्टाल ५०० खान सकिन्छ । कम दुख्छ भने जुनसुकै पेनकिलर खादा पनि भयो । पेनकिलरले बाझोपना ल्याउँछ भन्दै अल्पज्ञान भएको मान्छेहरुले भ्रम छरेको हुन् ।’
सरसफाई र खानपान
महिनावारीको समयमा शरिरबाट फोहोर रगत बग्ने भएकोले शरिर फोहोर हुने र गन्ध आउँने हुन्छ । त्यसैले महिनावारीको समयमा किशोरी र सन्तान जन्माईसकेका महिलाहरुले पनि सरसफाईमा बिशेष ध्यान पु-याउँनुपर्छ । शरिर नुहाउँनुपर्छ ।
सम्भव भएसम्म सेनेटरी प्याडको प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र सुतीको कपडा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । सेनेटरी प्याड बढीमा दुई वा तीन घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई सुरक्षित तरीकाले नष्ट गर्नुपर्छ । सुतीको कपडा प्रयोग गर्नेले दिनमा दुई तीन पटकसम्म कपडा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसलाई पुन प्रयोग गर्न राम्रोसँग सावुन पानीले धोएर घाम लागेको ठाउँमा सुकाउँनुपर्छ । गाउँघरमा भित्री बस्त्र र महिनावारीको बेला प्रयो गर्ने सुतीको कपडा कसैले देख्यो भने आँखा लाग्छ भन्ने अन्धबिश्वास पनि रहेको छ । यसले गर्दा त्यस्ता कपडा लुकाएर ओसतिर सुकाउने गरेको पनि पाईन्छ । त्यसो गरेमा प्रजननसम्बन्धि रोग लाग्न सक्छ । त्यस्तै एउटै कपडा प्याडको रुपमा लामो समय प्रयोग गर्नु हुदैन ।
महिनावारीको बेला तातो झोल र पोषणले भरीएको खाना खानुपर्छ भन्ने कुरामा डा. नुतन पनि सहमत छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यही खाने कुराले प्रजनन् स्वास्थ्य बिगार्छ भनेर किटान गर्न त सकिदैन तर पौष्टिक आहार दैनिक खादा प्रजनन् क्षमता बढ्छ ।’
होली गीत : ‘होलीले रङ्गियो मेरो नयाँ चोली’ र ‘जोगिरा सरर’ कै क्रेज